इङ्ल्यान्ड स्टार डेली अलीकी आमाको पीडादायी कथा : आमाको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उनलाई १३ वर्षकै उमेरमा अरु कसैले अपनाएर लागेका थिए तर अहिले उनले आफ्नै आमालाई चिन्दैनन् ! – Etajakhabar
इङ्ल्यान्ड स्टार डेली अलीकी आमाको पीडादायी कथा : आमाको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उनलाई १३ वर्षकै उमेरमा अरु कसैले अपनाएर लागेका थिए तर अहिले उनले आफ्नै आमालाई चिन्दैनन् !
लन्डन – जारी रुस विश्वकपमा सशक्त प्रदर्शन गरेको इङ्ल्यान्ड २८ वर्षपछि सेमिफाइनलमा पुगेको थियो । सन् १९६६ को उपाधि विजेता टोली इङ्ल्यान्डले बुधबार दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा क्रोएसियासँग२-१ ले खेल हार्दै स्तब्ध भएको छ । त्यही खेलअघि एउटा समाचारले धेरैलाई भावुक बनाएको छ।
डेली अलीकी आमा डेनिस छोराको बाल्यकालको फोटो देखाउँदै । साथमा २० नम्बर जर्सीमा डेली अली।
यद्यपि आमाको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उनलाई १३ वर्षकै उमेरमा एलन र सल्ली हिक्फोर्डको परिवारले अपनाएको थियो। त्यसयता अलीले आफूलाई जन्म दिने वास्तविक आमाबाबालाई भेटेका छैनन्। उनकी वास्तविक आमा डेनिसले पछिल्लो समय आफूले छोरा अलीलाई भेट्ने प्रयास गर्दा सम्भव नभएको बताएकी छन्। डेनिसले आफूले दुई÷तीन पटक अलीलाई ईमेल पठाउँदासमेत त्यसको जवाफ नआउँदा दुःख महसुस भएको बताएकी छन्।
२२ वर्षीय आक्रामक मिडफिल्डर अली घरेलु टोली टोट्टनहाम हर्टस्परबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्छन्। सन् २०१५ देखि इङ्ल्यान्डको राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्न थालेका अली त्यसयता नियमित सदस्य रहँदै आइरहेका छन्। श्रोत अन्नपूर्ण
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आषाढ २८, २०७५ समय: ४:१३:४०